update : KNU-KAF ပူးတွဲ ဖိတ်ကြားချက် KNU ပယ်ချ
UWSA ဝ ပြည် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး အဖွဲ့ ဌာနချုပ် ပန်းဆန်းမှာ ကျင်းပဖို့ ညီလာခံ အတွက် ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU အတွက် ဖိတ်စာမှာ KNU-KAF ဆိုပြီး လိပ်မူ ထားလို့ KNU က လက်မခံဘူး ဆိုပြီးUWSA ကို အကြောင်း ပြန်ကြား လိုက်ပါတယ်။
KNU အနေနဲ့ အဲဒီလို KNU-KAF ဆိုပြီး သုံးစွဲတာ မရှိတဲ့ အတွက် ပြန်ပြီး အကြောင်း ကြား လိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ KNU အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဖဒို ကွယ်ထူးဝင်းက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
KAF ဆိုတာ ကတော့ ကရင် အမျိုးသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး တပ်ဖွဲ့များ ပူးပေါင်း ထားတဲ့(Kawthoolei Armed Forces) ကော်သူးလေ တပ်မတော် ဆိုပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် အောက်တိုဘာ လမှာ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ KAF ကိစ္စကို လာမယ့် KNU ညီလာခံ ကျရင် ဆွေးနွေးဖို့ ရှိတယ်လို့လည်း ဖဒို ကွယ်ထူးဝင်းက ပြောပါတယ်။
UWSA ပြောခွင့်ရ ဦးအောင်မြင့် ကတော့ KNU နာမည် တခုတည်း လိပ်မူပြီး ဖိတ်စာ အသစ် ပြန်ပို့ ခဲ့ပြီလို့ ပြောပါတယ်။ မေလ ၁ရက်နေ့ ညီလာခံက လည်း ကျင်းပ ဖို့ သေချာ သလောက် ရှိနေ ပြီလို့ ဘီဘီစီကို ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
ညီလာခံ ကျင်းပဖို့ အတွက် UWSA ကနေ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေ ကို ဖိတ်စာ ပို့ထား ပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ဒီဆွေးနွေးပွဲ လည်း မြန်မာနိုင်ငံအတွက်
13 APRIL 2015 Domestic and international public attention to the non-Burman leaders of the National ethnic armed ceasefire conference has been scheduled for May 2015 continue to be held in May 1-3 UWSA headquarters Pangsang.
Kachin Independence Army meeting by KIA, NDAA , UWSA co-chaired.
(1) RCSS Restoration Council of Shan State
(2) KIA KIO
(3) KNU Karen National Union
(4) KNPP Karenni National Progressive Party
(5) NMSP NMSP
(6) UWSA United Wa State Army
(7) PNLO Palestinian National Liberation Organization Ou
(8) PSLF Bu Langbang Liberation Front
(9) AA Arakan Army
(10) SSPP Shan State Progress Party
(11) NMAA National Democratic Alliance Army (Mengla Army)
(12) MNDAA courageous allies
(1) WNO wa Peoples Organization
(2) LDU Lahu Democratic Union
(3) ANC Rakhine Nationalities Committee
(4) CNF Chin National Front
(5) DKBA troops Democratic Karen Charity
(6) ALP Arakan Liberation Party
(7) KPC Karen Peace Council
Federal peace and dialogue (PyidaungsuInstitute for Peace and Dialogue) Khuensai Jaiyen said: Many national ceasefire help group leaders worry: If not all members participate in the meeting, would be difficult to carry out nationwide ceasefire resolution.
USWA United Wa State Army spokesman Wu Angmin -UAung Myint explained:
* We support the peace negotiations and the peace process will not be shaken.
* Invitation list by the Commission in accordance with the Karen and Kachin LawKee Lar Laiza conference to develop – that is until March 31, 2015 NCA National NCCT draft ceasefire agreement signed with the Government of Myanmar.
* We have noticed that the meeting content has changed, it will be appropriate to consider.
cr. chinese media weibo com